चर्चित अभिनेत्रीले हट भिडियो सेयर गर्दै यो कस्तो छ ? भनेपछि सामाजिक सन्जाल यसरी ततायो (भिडियोसहित) -
चर्चित अभिनेत्रीले हट भिडियो सेयर गर्दै यो कस्तो छ ? भनेपछि सामाजिक सन्जाल यसरी ततायो (भिडियोसहित)
यस भिडियोमा, जरीन खान कसरत गरिरहेको शैली वास्तवमै हेर्न लायकको छ । यस भिडियोलाई अभिनेत्रीले उनको इन्स्टाग्राम रिलबाट साझेदारी गरेको छ, जुन अहिलेसम्म लाखौंले हेरेका छन् । प्रशंसकहरु जरीन खानको यो भिडियोमा टिप्पणी गरेर थाकेका छैनन् । भिडियोमा, अभिनेत्री कालो टी–शर्ट र खरानी रंगको टाईटमा देखिएकी छिन ।
यसमा, अभिनेत्री डम्बलसँग कसरत गरिरहेको देखिन्छ । भिडियो साझेदारी गर्दै, जरीन खानले लेख्छिन्, ‘यो कस्तो छ ?’ भिडियोमा, फ्यानहरूले पनि जरीन खानको जबरदस्त शैलीको प्रशंसा गरिरहेका छन् । हामी तपाईंलाई बताउँछौँ कि जरीन खान आफ्नो दोषहीन शैलीको बारेमा चर्चामा पहिलो पटक आएकी होईनन् । यस भन्दा पहिले पनि, अभिनेत्री कहिलेकाँही उनको नृत्य भिडियोहरू र कहिले ग्लैमरस लिमलाइटमा देखिन्छन् ।
तपाईंलाईं जानकारी गराउ कि जरीन खान फिल्म ‘वीर–२०१०० बाट बलिउडमा डेब्यु गरेकी हुन् । यस बाहेक, जरीन खान हरर फिल्म ‘१९२१’ मा देखिएकी थिइन् । तर यो फिल्म बक्स अफिसमा सफल हुन् सकेन । यति मात्र होइन २०१७ मा आएको उनको ‘अक्सर २’ ले पनि बक्स अफिसमा राम्रो प्रतिक्रिया पाएको छैन । बलिउडसँगै जरीन खानले तेलगु र पञ्जाबी सिनेमामा पनि आफ्नो हात चलाउन खोजिन् । अभिनेत्री अन्तिम पटक पञ्जाबी फिल्म डाकामा गिप्पी ग्रेवालसँग देखिएकी थिइन् ।
रङ्गेहात पक्राउ थोरै होइन ३ लाख २० हजार घुस, अरु होइन मालपोतकै दुई कर्मचारी !
यी युवतीको अचम्मको विज्ञापन, ६३ हजार लैजाउ गर्भवती पनी बनाउ !
वेब श्रृंखलामा मन्दिरमैँ म्वाँई खाएपछिको हंगामा, प्रतिबन्ध लगाउन माग !
उर्वशी रौतेला यसरी आफ्नो बोमाइल नम्बर इन्ष्टाग्रामबाट सार्वजनि गरेपछि !